हरर चलचित्रहरू को प्रशंसक पक्कै छोडेर सानो-शहर घरहरू मध्ये निरन्तर को रहस्यमय र रहस्यमय परिस्थितिमा बारेमा बताउन, "Sinister" फिल्म सम्झना। एक सर्वोत्तम विक्रेता काम एक लेखक, जहाँ एक वर्ष पहिले त्यहाँ रहस्यमय हत्या भएको घर, बस्न बाध्य छ। हामी फिलिम को पहिलो भाग माग र सार्वजनिक माग, को आशा किनभने हाल को वर्ष मा दर्शक तर्साउने काम भन्दा शायद पूरा भनेर भन्न सकिन्छ। राम्रो नराम्रो को विजय को पहिलो भाग मा याद, त्यसैले एक sequel अपरिहार्य थियो। प्रशंसक उत्कट रिलिज टेप "Sinister 2" प्रतीक्षा गर्दै छन्। चलचित्र समीक्षा हामी पछि प्रस्तुत।
तपाईं सिनेमाको पहिलो भाग हेर्नुभयो भने, तपाईं पूर्णतया प्लट, को लडी मात्र अप्रत्यक्ष पहिलो भाग को कार्य संग जोडिएको हुनाले छ बुझ्न हुनेछ। वास्तवमा, यो आफ्नो नायक एउटा छुट्टै तस्वीर छ। उनको दुई छोरा संग जवान आमाले श्रीमानको तानाशाही सतावट लुकाउन थियो, यो परिवार केही समय घर लागि खाली मा बसे। तिनीहरूले घर नजिक नरसंहार प्रतिबद्ध छ भन्ने तथ्यलाई माथि राख्न इच्छुक थिए। यो त्रास फिलिम "Sinister 2" एक गुप्तचर रूपमा सुरु हुन्छ।
Kortni Kollinz र तिनका छोराहरूलाई Dylan र Zach एक सेवानिवृत्त उप शेरिफ आगो सेट गर्न जाँदै छ जो घर, मा लुकाउन बाध्य छन्। नायक को निष्ठूर नेतृत्व सबै देश मा कुनै तरिका गाढा सेना प्रभावित कि घरहरू, संग त गर्छ भूत Baguley। समय, को गुप्तचर परिवार एक घातक गल्ती र आफूलाई तन्त्रमन्त्रमा वर्ण, उनलाई घर छोड्न लागि पर्याप्त छैन प्रभावबाट सुरक्षाको लागि भनेर बुझ्छ। Courtney छोराहरू पहिले नै Baguley मा हुक मा। छैन महाकाव्य सागा अन्तिम - यो समय राम्रो वा नराम्रो त्रास सिनेमाको विजय "Sinister 2" हुनेछ? हेर, र तपाईं पक्कै पनि सिक्न हुनेछ।
अभिनेता र भूमिकाको
पहिलो भाग मा देखा जो मान्छे को केवल एक अभिनेता, दोस्रो समावेश छ। यो पूर्णतया जायज कहानी छ। अब Forefront नयाँ वर्ण छन्। पूर्व उप शेरिफ, एक अनौठो उपनाम अन्त्य छर्न छर्न छ अब एक निजी गुप्तचर बन्नेछ। को protagonist को भूमिका Dzheyms Renson प्ले। उहाँले चर्च मा रक्तपातपूर्ण हत्या को यसको आफ्नै स्वतन्त्र छानबिन जान्छ समानान्तर मा अविश्वासी पत्नी मा गुप्तचर जीवित, कमाउन। वास्तवमा, फिलिम "Sinister 2" (प्रतिक्रियाहरू पछि प्रस्तुत गरिनेछ) मा लेखक एलिसन Oswalt, अघिल्लो भाग को protagonist को परिवार को हत्या मा छानबिन सञ्चालन गरिएको छैन। दर्शक यो वास्तवमा केही भ्रम हुन्छ।
हामीले हालै विस्तृत स्क्रीन मा फिलिम "Sinister 2" जारी विषय मा कुरा गर्न जारी। अभिनेता रबर्ट दानियल Sloan (Dylan) र Dartanian Sloan (Zac) जुम्ल्याहा भाइहरूको भूमिका प्रदर्शन। दर्शक गरेको ध्यान अधिकांश ठीकै तिनीहरूलाई को पहिलो पायो छ। आमा को भूमिका मा अभिनेत्री तारा अङ्कित Shannyn Sossamon। को despotic र क्रूर बुबाको परिवारको भूमिका Lia कोको गए। अभिनेताहरु छैन भन्दै, चलचित्र "Sinister 2" हेर्नुभएको छ जो सबैलाई छ, उनको टाउको भन्दा उच्च कूद कुनै पनि उल्लेखनीय प्रतिभा र क्षमता देखाउन थिएन, तर सिर्फ आफ्नो काम गरे।
यो फिल्म थप बच्चा वर्ण संलग्न। अभिनेताहरु को नाम केहि सार्वजनिक छैन भन्छन्, तर हाम्रो बच्चाहरु उल्लेख दिनुपर्छ। साहस र fearlessness लागि कम से कम। हरेक बच्चा एक हरर चलचित्र फिलिम को प्रस्ताव स्वीकार गर्न हिम्मत। Dzheyden Kleyn, Lukas Dzheyd Sumann, Layla Heyli, Oliviya Reyni, Kayden एम फ्रिट्ज: यहाँ साहसी डेयरडेविल्स को नाम हुन्।
सन्तानको प्रत्येक आफ्नै परिवारको विनाश लागि एक पटक Baguley निर्वाचित भएको थियो। तिनीहरूलाई प्रत्येक को खातामा यसको बारेमा फिल्म गोली। प्रेत बच्चाहरु निर्देशन अनुसार कडाई कार्य, र अन्य संसारमा बाँचिरहेका छौं। Baguley को भूमिका निकोलस राजा प्ले। कसरी प्राप्त गर्न चलचित्र "Sinister 2" - यसलाई दर्शक गर्न छ। को प्रशंसक, एक नयाँ उत्पादन सम्झना छैन सधैं पहिलो भाग एक समानान्तर आउनुहुनेछ। ती सबैभन्दा लडी मूल गर्न स्पष्ट कमसल छ भन्ने दृष्टिकोण व्यक्त। तथापि, रूपमा लगभग सधैं sequels संग हुन्छ।
निर्देशक र संगीतकार परिवर्तन
यो प्रकाशन हामी फिल्म "Stinister 2" को विस्तृत कभरेज छ। अतिथि दर्शकहरूलाई पछि प्रस्तुत गरिनेछ। विशेष गरी, मामला मा अलौकिक कुरा को लडी आशा छैन, निर्देशक परिवर्तन भने। पहिलो भाग स्कट Derrickson शुरू भने, सबै भन्दा राम्रो ", एमिली गुलाब को Exorcism" फिलिम को लागि जानिन्छ को sequel लागि, Kieran Foy लिए कि छोटो फिल्म शूटिंग मा मुख्य रूप विशेषज्ञता अघि। म संगीतकार परिवर्तन गर्न "Sinister 2" को धेरै गुमाए (अभिनेताहरु पहिले प्रस्तुत गरेका थिए)। धेरै राम्रो संगीत पहिलो भाग थप पहिले देखि नै काल वातावरण अप हीटिंग भन्ने विश्वास गर्छन्। संगीतकार Kristofer यांग Tomandandy पोस्ट को सांगीतिक साथमा जाने वस्तु लागि अब, दोस्रो भाग संलग्न छैन।
आलोचकहरु पनि सुन्दर भेट टेप "Sinister 2"। यस साईट निर्देशक Kieran Foy को समीक्षा स्पष्ट असफलता र कमीकमजोरी संकेत गर्छ। आलोचकहरु शायद, चलचित्र को दोस्रो भाग निर्देशक अघि छैन एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य थियो, कि दर्शाउन। तर, यो उहाँले गम्भीर काम भेट्नुपर्छ गर्न छैन कि होइन। फिल्म, कुनै तार्किक लडी छ भनेर अनावश्यक र अनावश्यक दृश्य धेरै मा। मुख्य पात्र - बिल्कुल spineless व्यक्ति। उसलाई र परिवार नवजात रोमान्टिक संलग्न आमा बीच हेर्न सबै थप अनौठो। यसलाई जीवित छोराछोरीलाई स्पष्ट newcomers अन्य संसारबाट, तिनीहरूलाई कुरा र अन्तरक्रिया गर्न, जबकि कहिल्यै डराउने देख्न सक्नुहुन्छ कसरी बिल्कुल अस्पष्ट छ। पूर्ण असंगत एक प्रागैतिहासिक कोठामा मा लिपिबद्ध विधा को व्यवस्था अनुसार जो हिंसात्मक हत्या, यी सबै चलचित्र देखेको। पछिल्लो निरर्थक र incoherent यी तस्बिरहरू सबै। को finale दुखाइ आषा आफूलाई छ।
हामी चलचित्र "Sinister 2" कुरा जारी। बारी moviegoers समीक्षा। कम्पनी को उत्पादन कि आलोचकहरु छाप कम बजेट को एक जोडी, तर sverhudachnym टेप जारी, आफ्नो मनपर्ने स्केट मा बसे, र अब मानिसहरूको पैसा, को स्पीकरफोन को कूटवेश अन्तर्गत स्पष्ट उपभोक्ता सामान लुकाउने entices। केही हदसम्म यो मार्केटिङ चाल द्वारा जायज छ। तर, सायद, यो आदर फरक राय मा दर्शक को? यसको पूर्ववर्ती को laurels दावी गर्दैन - शायद कसैले भनेर "Sinister 2" (अगस्त 20, 2015 रूस मा सिनेमाहरू मा रिलीज मिति) बुझे? दर्शक तीन वर्ष पहिले हटाइएको टेप को लडी, विशेष ध्यान पाउनुपर्ने तर्क। मात्र किनभने अब पूर्ण विधा परिवर्तन र शैली, र, वास्तवमा। दोस्रो भाग निर्देशक काम गर्न आत्म-विडंबना, खुट्टाोडी को तत्व र absurdities र oddities ल्याउन सक्षम थियो। यो चलचित्र अवस्थित एक सही छ। साथै, हामी फिलिम ज्यादातर किशोर दर्शक अपील गर्नेछ खातामा लिन भने, सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ। दर्शक युवा छन् र अतिरिक्त समय भएका गर्नेहरूलाई फिलिम गर्न सल्लाह छन्।
हाम्रो आजको पोस्ट मा, हामी चलचित्र "Sinister 2" बारे कुरा। स्वराङ्कित Mihail हीटिंग, अन्ना रूसी चित्रकला मा Soboleva Elena Uzlyuk र अरूलाई। यो के हो: पूर्ण असफलता वा निर्देशक Godsend - यसलाई तपाईं हो।
सबै अवरोध तल: पार्कआवर बारेमा चलचित्र!
Nonna Terentyev: जीवनी, सोभियत अभिनेत्री को क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
भिटाली Emashev: Filmography, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
चलचित्र देखि उद्धरण "भाइ" र "भाइ 2"
सस्ता मोबाइल शुल्क: विवरण, सेवा र समीक्षा
"चीनी कफी बीन्स" - परम्परागत औषधिको लागि एक नुस्खा
वयस्क मा जिब्रो मा सेतो पैच को कारण के हो पत्ता
बच्चा खानेकुरा undigested को मलको मा: कारणहरू
कार्यक्रम चालक बूस्टर: समीक्षा विशेषज्ञहरु
फ्लोरिजिज के हो? अवधारणा, परिभाषा, प्रकारहरू।